8 ÷2(2 + 2)? လူတိုင်းကိုဝေငှခြင်းဗိုင်းရပ်စ်သင်္ချာမေးခွန်း၏အဖြေ - သတင်း
8 ÷2(2 + 2) ကဘာလဲ? ကမ္ဘာကြီးကိုဝေငှခြင်းသင်္ချာမေးခွန်းရဲ့အဖြေ
နောက်ဆုံးတော့မင်းရဲ့သင်္ချာ GCSE ကိုသုံးဖို့အချိန်တန်ပြီ၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့တွစ်တာကိုလုံးဝကွဲပြားပြီး (pun Pun ရည်ရွယ်ထားခြင်းမရှိ) ကိုရိုးရိုးရှင်းရှင်းပဲရနိုင်ပါတယ်။ မေးခွန်း 8 ÷2(2 + 2) သည်မည်သည့်အရာနှင့်ညီသနည်း။ သို့သော်လူတိုင်းရရှိသောကွဲပြားသောအဖြေနှစ်ခုရှိသည်။
oomfies ဒီကိုဖြေရှင်း pic.twitter.com/0RO5zTJjKk
- ♥ in (@pjmdolI) တွင် ဇူလိုင်လ 28, 2019
သင်ဟာကြီးမားတဲ့သဘောတူညီမှုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီညီမျှခြင်းမှာကိုယ်ပိုင် meme အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ထားလို့ပဲ သိ။
ဒါဟာ '8 ÷2(2 + 2) = ကပြောပါတယ်? တစ်ခါတစ်ရံတွင် 8/2 (2 + 2) အဖြစ်ရေးထားသည်မှာ 2019 ဇူလိုင်နှောင်းပိုင်းတွင်အွန်လိုင်းကျယ်ပြန့်စွာဖြန့်ဝေခဲ့သောမရေရာဒွိဟအက္ခရာသင်္ချာဖြစ်သည်။
တွစ်တာတွင်ပြproblemနာနှင့်ပတ်သက်သောအသုံးအများဆုံးအဖြေများမှာတစ်ခုနှင့် ၁၆ ခုမျှသာဖြစ်ပြီးသုံးစွဲသူများအနေဖြင့်မည်သည့်လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုစနစ်ကိုခွဲခြားသတ်မှတ်မည်နှင့် ပတ်သက်၍ ကြာမြင့်စွာငြင်းခုံမှုများဖြစ်ပေါ်စေခဲ့သည်။
- မျှော်လင့်ချက်လား (@umutkatirci) သြဂုတ်လ 1, 2019
တစ်ဝက် = 8 8 ÷2(2 + 2) စဉ်းစားပါ
လူအများစုကဒီမေးခွန်းရဲ့အဖြေကတစ်ခုပါ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့မင်းက brackets တွေကိုအရင်လုပ်ပြီး ၄ ရတာပေါ့။ အဲဒါကို brackets အပြင်မှာနှစ်ခုနဲ့မြှောက်ပြီးရှစ်ရပြီးတော့ရှစ်နဲ့စားလိုက်ရင်ရှစ်ကတစ်ခု။
ကြွင်းသောသူတို့သည် 8 ÷2(2 + 2) = 16 ယုံကြည်ပါတယ်
အခြားသူများကဤမေးခွန်း၏အဖြေမှာအမှန်တကယ်ဖြစ်သည်ဟုထင်သည်။ ၁၆။ သင်ကွင်းခတ်။ ပထမလေးရလိမ့်မည်။ လေးယောက်ရ ပြီးတော့ခင်ဗျားဒါကိုလေးကွင်းထဲကကွင်းလေးခုထဲကလေးလေးလုံးပြီး ၁၆ ရမယ်။
အကယ်၍ သင်သည် sum ကို Google ထဲသို့ရိုက်ထည့်ပါကအဖြေမှာ ၁၆ ဖြစ်သည်ဟုဆိုသည်။ သို့သော်တွစ်တာမှအဖြေအများစုမှာတစ်ခုဟုဆိုကြသည်။
အချို့သောဂဏန်းတွက်စက်များသည် ၁၆ ဆိုသည်ဟုဆိုကြသော်လည်းအချို့ဆိုသည့်အချက်မှာစက်များတွင်ပင်အဖြေမရှိပါ။
၈/၂ (၂ * ၂)
ဘယ်ဟာကိုသင်ပိုယုံကြည်စိတ်ချလဲ ??? pic.twitter.com/ypMaMPoy0R
- လက်မှတ်ရအင်ဂျင်နီယာ ?? (@Mech_Mind) သြဂုတ်လ 1, 2019
The Mirror ကိုပြောဆိုသောအမည်မဖော်လိုသော Oxford တက္ကသိုလ်မှပါမောက္ခတစ် ဦး ကပြောကြားခဲ့သည်။ 'ပိုကောင်းတဲ့ကွင်းခတ်မှုမရှိဘဲ၊ UK ကိုကျောင်းများရှိတစ်ခါတစ်ရံတွင် BODMAS ဟုခေါ်သည်။
မရှင်းလင်းသေးတဲ့ပုံပေါ်နေရင်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့မရေရာဒွိဟတွေကိုဖယ်ရှားဖို့ကွင်းခတ်တွေထည့်တာအကောင်းဆုံးပါပဲ။ သင်္ချာပညာရှင်များသည်ဤကဲ့သို့သောအရာများအကြောင်းတစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး ဆက်သွယ်ပြောဆိုရာတွင်ယေဘုယျအားဖြင့်ပြproblemsနာမရှိပါ။ သို့သော်မည်သည့်အကြောင်းကြောင့်ပင်ဆိုရှယ်မီဒီယာတွင်ဤပြofနာမျိုးကိုလူတို့နှစ်သက်သောပုံရသည်! '
အကယ်၍ သင်သည် PEMDAS နည်းလမ်း (US ပိုမိုသောနည်းစနစ်) ကိုအသုံးပြုပါကညီမျှခြင်း၏အမှာ Parenthesis, Exponents, Multiplication, Division, Added, Subtraction ဖြစ်သည်။
သင် BODMAS နည်းလမ်း (ယူကေတွင်ပိုမိုလေ့ကျင့်သင်ကြားခြင်း) ကိုသင်သုံးပါကအမှာစာ၊ အမိန့်၊ ဌာနခွဲ၊ မျိုးပွားခြင်း၊ ဖြည့်စွက်ခြင်း၊ နုတ်ခြင်းတို့ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်ကွဲပြားခြားနားသောအဖြေများပေးခြင်း။
ဒီတော့နှစ် ဦး စလုံးမှန်ကန်တဲ့?!
၈ ÷ ၂ (၂ + ၂) ကဘာလဲလို့မင်းထင်သလဲ။
• 'Sco Pa Tu Manaa' သည်အဘယ်အရာကိုဆိုလိုသနည်း။ ၎င်းသည်တွစ်တာတစ်ခုလုံးတွင်အဘယ်ကြောင့်ရှိသနည်း။
•သင် GCSE သင်္ချာကိုသင်ဆက်လက်သင်ပေးနိုင်သလား။
•ဒီ 2019 GCSE ပဟေquိကိုဖြေပြီးသင့်မှာအရည်အချင်းမရှိဘူးဆိုတာကိုသဘောပေါက်လာပါလိမ့်မယ်